Bathroom Double Towel Izingwegwe Igolide Elicwengekileyo
Ikhaya / izesekeli / Izinto Zokugeza / WOWOW Ibhulashi leThawula elenziwe ngegolide le-WOWOW
WOWOW Bronze Gold Towel Hook
Xhumana nesevisi yamakhasimende ukuthola i-hook yetail yamahhala: sales@wowowfaucet.com, isipho samahhala nokuthunyelwa kwamahhala.
yokugezela ithawula izingwegwe ezimbili uzonikela ebhizinisini lokugezela, igumbi lokonga, futhi nomdlalo wamakamelo okulala, ikhishi, igumbi lokugezela, negumbi lokuhlanza impahla, igumbi lezindwangu, izindawo zokunethezeka zokunethezeka kanye nama-spas.
I-Bathroom Double Towel Brushed Gold Hooks
Yakhiwe ngensimbi engenasisekelo engu-304-notch sus XNUMX eqinisekisa ukuqina nokuthembeka.
Ukuqothuka kwe-PVD ye-Zirconium okubushelelezi akubonisi noma yiziphi amabala futhi kumelana nokuklanywa kwansuku zonke, ukunakekelwa kwansuku zonke kuqondile, kugcina ukubukeka kwawo bushelelezi futhi kufanelekile kalula. Umklamo wesimanje uhlangana nokuhlobisa okuningi kwendlu futhi unikeza indawo eningi yokulenga izinto esendleleni yokungena, indawo yokuhlanza impahla, yokugeza kanye nasekamelweni lokulala.
Imikhiqizo Engabizi - intengo enobungani yento esezingeni eliphakeme, ukukhetha okuhle kwendlu yangasese.
Kulula ukufaka, futhi ukufaka i-hardware kufakiwe
Uma ufuna ukuthenga kusuka e-Amazon noma uqhathanise amanani, chofoza lapha: I-Double Robe Hooks Gold
I-SKU: 4020301BGD Categories: izesekeli, Izinto Zokugeza, Izifiso Ezifakiwe Tags: Igolide elixubile, Wall Hook, I-Wall Isekelwe
I-WOWOW Stainless Steel faucet Ibamba Mnyama nge ...